Usekubhaceni owayengumdlali kumaZulu FC odutshuliwe | News24
Usekubhaceni owayengumdlali kumaZulu FC odutshuliwe
Durban - Isekubhaceni ingwazi kanobhutshuzwayo esinde ngokulambisa idutshulwa ngentululwane yezinhlamvu ngabantu abangaziwa eMatabetulu eNanda, enyakatho yeTheku ngoDisemba wonyaka ophelile, kubika iphephandaba ILANGA.
USam Nzama, 42, ozakhele igama edlalela amaZulu FC, iNathi Lions neFidentia Rangers okungamakilabhu abegijima kuMvela Golden League (osekuyiNational First Division), usale engenamlenze kulesi sigameko okusolwa ukuthi abantu abamdubulile bebemlalele unyendle.
Kubikwa ukuthi ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko, uNzama ubehamba nabangani bakhe okunguMnu Senzo Msomi noMnu Sizwe Nzuza bobabili abashonele endaweni yesigameko kwathi uNzama noMnu Manqele (elingatholakalanga igama lakhe) balimala kanzima.
Kubikwa ukuthi uNzama ulimala nje, ubekade esazama ukungena kwezamabhizinisi njengoba yena nabanye abangani bakhe bebenza umsebenzi wokukha isihlabathi khona eNanda bese siyadayiswa.
ILANGA lihabule ngomthombo walo ukuthi kunesinsolo zokuthi ukulimala kwakhe kuhlobene nalo msebenzi njengoba bekukhona abesebenzisana nabo.
Ekhuluma neLANGA, uNzama, esekubhaceni, uthi kakukho zinsongo azitholile ngaphambi kokuba badusthulwe futhi akekho umuntu angamcabanga angathi uke waxabana naye.
Uthi namanje kakukavumi akholwe ukuthi akasenawo umlenze.
"Ngikhumbula ukuthi ngelanga esilimale ngalo besihamba ngemoto kade siyothenga amafutha kagandaganga njengoba ubusebenza umba isihlabathi. Ngalolu suku bekushayela uSizwe mina ngihleli ngemuva kwakhe emotweni. Sithe sifika eMatabetulu singazelele lutho, ngabona sekuphihlika amawindi wonke emotweni, ngize ngabona emuva kwesikhashana ukuthi siyadutshulwa.”
“Ngithe uma ngibheka uSizwe noSenzo ngaphambili, ngabona sebethule bengasakhulumi imoto yahamba yayoshaya isigxobo. Kungalesi sikhathi ngibone khona ukuthi nami ngidubulekile emlenzeni njengoba enye inhlamvu ingishaye kwahlakazeka idolo. Ngilaliswe esibhedlela kusukela ngoZibandlela wabe usuyasuswa umlenze ngoba ubulimele kakhulu," kusho uNzama.
Uthi ufisa ukuthola umlenze wokufakelwa ukuze ezokwazi ukufana nabo bonke abantu, azihambele kahle futhi.
OLUNYE UDABA: Uyavela enkantolo usomatekisi osolwa ngokudlwengula amadodakazi
Inkinga athi ubhekene nayo wukuthi uyabiza lo mlenze kanti akanayo imali njengoba kungekho msebenzi awenzayo njengamanje kwazise nasekuqaleni ubesahlanganisa ngebhizinisi lesihlabathi.
"Impilo inzima njengamanje, kuyimanje ngicashile ngoba kangazi laba bantu bazobuya yini bazongiqedela. Okubuhlungu kakhulu wukuthi akukho noyedwa umseshi oke wangithinta noma weza kimina ezongibhalisa esitatimende ngokwenzeka. Engikufisayo nje wukuthola usizo kunoma ngubani ongangilekelela ngithole umlenze wokufakelwa ukuze ngizokwazi ukuzihambela njengawo wonke umuntu. Kunzima khona ukwamukela kodwa akukho engizokwenza ngoba vele kangisenawo umlenze," kusho yena.
Uthi selokhu engene esibhedlela mhla li-13 kuZibandlela - njengoba ephume ngoLwesine olwedlule - akukho ngisho nelilodwa iphoyisa elike laya kuyena liyothatha isitatimende ngokwenzekile.
Ebuzwa mayelana nezinsolo zokuthi ngabantu asebenzisana nabo ababahlaselile, uthe akukho muntu angamsola okwamanje kodwa wethemba ukuthi amaphoyisa azowenza umsebeni wawo kuboshwe abenze lokhu.
UNzama uthathe umhlalaphansi kunobhutshuzwayo ngowezi-2009 esedlalela iRangers. INkosi uNathi Maphumulo ebiphethe iNathi Lions - uNzama ake wadlala kuyona - uthe uzwelana kakhulu naye.
"Kubuhlungu ukuzwa lezi zindaba ngoba ngiyakhumbula ngizwa kuthiwa ulimele, bengingazi ukuthi useze wakhishwa umlenze. Ngiyazwelana kakhulu naye uNzama ngoba ngiyamazi uke wadlula ngaphansi kwesandla sami. Ubengumdlali ozimisele futhi ukuduma kweNathi Lions bekwenziwa ngabadlali abafana naye nabedlala nabo ngaleso sikhathi," kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, uthe bazoze bakwazi ukuthola imininingwane egcwele ngalolu daba namuhla ngoMsombuluko kwazise umphenyi wecala akekho emsebenzini.